Isiqinisi sokukodwa esisodwa samaphrofayli Abakhiqizi - China isisimamisi sephakethe esisodwa samaphrofayili Abahlinzeki & Ifektri
I-PVC Calcium Zinc Stabilizer ye-extrusion plastic PVC iphrofayela yefasitela yophahla
I-PVC Stabilizer / heat stabilizers ingesinye sezixazululo ezihamba phambili zamawindi e-PVC anamuhla futhi asebenzayo, iminyango, umnyango wethala, umnyango oshibilikayo, amawindi wesitolo, izindawo zokungena nezindonga zokwahlukanisa ngokuya ngohlelo lwamaphrofayli. Umbala wokuqala nokumelana nesimo sezulu kwamaphrofayli amhlophe wewindi kuyizidingo ezisemqoka zamaphrofayli, kuze kube manje, sithuthukise izinto zokuqinisa iphakethe elilodwa ezinezindawo ezinhle kakhulu ezinamandla ezimile futhi ezinamandla, futhi sinezidingo zokumelana ne-UV. Uma kuqhathaniswa nezinhlelo zendabuko ze-Pb, izilinganisi ze-CaZn zinokugcinwa kombala okufanayo noma okungcono, amandla okuba nomthelela noma ukuqina kobukhulu, noma ngabe kuvezwe ekushintsheni okuqinile kokushisa, noma esimweni sezulu esimanzi nesomile nemijikelezo yemisebe yelanga amaphrofayli ewindi e-PVC azinzile ngale ndlela angagcina izakhiwo zemishini.
I-PVC Stabilizer yethayela elingenamanzi Ithayela lokufulela upulasitiki I-PVC Ishidi Elithambile I-PVC resin Ishidi lepulasitiki
AmaCalcium Zinc Stabilizers / heat stabilizers ahlinzeka ngezinhlelo zokuphahla ze-PVC ezingezona ezinobuthi zibone ukukhula okukhulu eminyakeni yamuva ngenxa yezici ezahlukahlukene zokuma, ikakhulukazi, impilo ende, ukuqina ezimweni ezinzima zezulu nokushisa, izindleko zomjikelezo wempilo ephansi, ukusebenza kahle kwamandla, ukushisa kanye ukubonakaliswa kwelanga, ukumelana nelangabi, ukumelana namakhemikhali kanye negrisi phakathi kwezinye izinzuzo. Futhi, iziqinisi ze-PVC zinikela ngokusebenza kahle kwamandla, zilungele ukukhiqizwa kweshidi, ukuzinza okuhle kokushisa, ukuzinza okushisayo okude.
Izithambisi zekhwalithi ephezulu ze-PVC zothango lwesitimela Izivalo ze-PVC Ingadi yokubiyela i-Picket kocingo lwamahhashi wesitimela
Uthango lwe-PVC luyinketho ekhangayo futhi esebenzayo kunoma iyiphi iphedi yedokodo, esitebeleni noma samahhashi. Ucingo lwe-Vinyl wesitimela, oluvame ukubizwa ngokuthi lucingo oluhlukanisiwe, luyisixazululo esikhulu sokonga ukonga kuzo zonke izinhlobo zeprojekthi. Uma kuqhathaniswa nezinhlelo zendabuko ze-Pb. I-Aimsea inikeza uhla olubanzi lokuqiniswa lazo zonke izinhlobo zocingo. Iziqinisi ze-Aimsea CaZn zinokugcinwa okungcono kombala, amandla okuthelela noma ukuzinza kokukhiqiza kocingo lwe-PVC. Noma ngabe uvezwe ekushintsheni okuqinile kokushisa, noma esimweni sezulu esimanzi noma esomile nemijikelezo yemisebe yelanga ucingo lwe-PVC oluzinzile ngale ndlela lungagcina izakhiwo zazo zingumshini.
Isiqinisi esihle se-PVC sokufakwa okushisayo Umbala wewindi lephrofayili yeminyango yeminyango yombala we-co-extrusion
IVinyl eguquguqukayo iyisifudumezi esishisayo kakhulu lapho sisetshenziswa njengokwahlukanisa noma iminyango. Kungabangela ukonga amandla okuphezulu okushisayo ezakhiweni zakho, endlini yokugcina impahla noma kumasifundisane. Kulula ukuyisebenzisa nokufaka, ukwahlukaniswa kwe-vinyl kuzomisa ukushintshana kokushisa, ngaleyo ndlela konge izindleko futhi kwandise induduzo yabasebenzi. Isiqinisi sethu seCalcium Zinc sizokwamukela yonke le mfuneko yokufaka okushisayo engeyona enobuthi nemvelo enobungane. I-stabilizer inokuqina okuhle kwesimo sezulu, umbala wokuqala omuhle kakhulu, ipuleti ephansi ukuphuma, ububanzi bokucubungula.
I-PVC One Pack Stabilizer, I-PVC Heat Stabilizer Ye-Flexbile, I-PVC Isinqinisi Esingenabuthi, Isisimamisi se-PVC, I-PVC Heat Stabilizer, PVC Izithasiselo,